रोल्वालिङको विपन्न शेर्पा परिवारको कथाले मन छोयो - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
रोल्वालिङको विपन्न शेर्पा परिवारको कथाले मन छोयो (फ्रन्टपेज : आरोही परिवार) । यो वास्तवमै गौरव लायक कुरा हो । आफूले जानेको, सिकेको कुरालाई नै पेसागत रूपमा अँगाल्नु अझ राम्रो हो । आफैं व्यवसाय गर्न खोज्नेहरूका लागि शेर्पा परिवार प्रेरणाको स्रोत भएको छ ।
जतिसुकै दु:खद भए पनि अतीत भनेको बाँच्ने आधार हो (युवा मन : स्मृतिको लोकमा) । मानिस अतीतमै बाँचिरहेको हुन्छ अनि सुखद भविष्यको कल्पनामा डुबिरहेको हुन्छ । म सुबिनजीको विचारसँग सहमत छु ।
डा. गोविन्द केसीको नाम लिएर कैयौंले राजनीति गरे । मानौं डा. केसीबाहेक देशमा अरू कुनै एजेन्डा नै छैन । सत्तामा बस्दा बेवास्ता गर्ने दलहरू पनि बाहिर आएपछि उनकै नाममा राजनीति गर्छन् ।
परदेश गैसकेको, झन्डै चलचित्र क्षेत्रबाट हराइसकेको व्यक्ति नेपाल फर्किएर सक्रिय हुनु सुखद हो (अन्तर्वार्ता : त्यो कालरात्रि नै थियो) । अन्य धेरै कलाकारले खनालको जीवनबाट केही सिक्न सक्छन् ।
एसईईमा उत्कृष्ट हुन सफलहरूलाई शुभकामना (एसईई अब्बलका सपना) । मनमा संगालेका सपना तथा लक्ष्य पूरा हुन् ।
दुर्गेशजी, तपाईंका बारेमा पढेर गज्जब लाग्यो (संगीत : इखले चम्किएका दुर्गेश) । यसरी नै प्रगति गर्दै जानुहोला— बधाई छ ।
सुनिल राना क्षेत्री, बिरेन, गणेश न्यौपाने तथा युवराज छत्याल
सुदूरपश्चिममा जन्मिएर मध्यपश्चिममा हुर्किएकी अनिता आफ्नो पहिचान बनाउन संघर्षरत छिन् (टर्निङ प्वाइन्ट) । काठमाडौंमा उनले गरेको संघर्ष खेर जाने छैन । एकदिन पक्कै सफल हुनेछिन् ।
विश्वकप फुटबलसम्बन्धी अधिकारी रवीन्द्रको लेख रमाइलो लाग्यो (समय सन्दर्भ : विश्वकप दर्शन नियमावली–२०१८) । नेपालमा अचम्मका फुटबल प्रशंसक छन् । आफ्नो कारणले अरूलाई असर पुर्‍याउने, कोलाहल मच्चाउने खालका धेरै घटना भैरहेका छन् । यस्तो क्रम रोकिनुपर्छ । आयोजक देशहरूले पनि यतिसम्म गर्दैनन् । नेपालीहरू अनावश्यक क्रियाकलापमा बढी समय खर्चिन्छन् ।
धान दिवसमा आयोजित रेस्लिङ प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ (धान दिवसमा हिले रेस्लिङ) । हिमालयन टाइगर प्रो. रेस्लिङ एसोसिएसनले यतातिर पनि ध्यान दिए हुन्थ्यो ।
यो त पटक्कै सुहाएन (अन्डा हानेर स्वागत) । दक्षिण कोरियाका खेलाडीले सकेको राम्रो खेलेकै हुन् । आफ्नो देश फर्किएका खेलाडीहरूलाई अन्डा हान्नु अनुचित हो ।
असिम थपलिया र आकृति थापा दुवैलाई बधाई छ (मिस्टर एन्ड मिस टिन तनहँु) । यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पढाइमा चाहिँ असर नपुर्‍याउनुहोला ।
यो गम्भीर विषय हो (चिठ्टाको चंगुल) । धेरै नेपाली चिठ्ठाको चंगुलमा परेका छन् । चेतना जगाउने यस्ता खालका सामग्रीको बढीभन्दा बढी प्रचार गर्नु जरुरी छ ।
अभिनेत्री आँचल शर्माको निर्णय सही हो (हूलमूलमा काम नगर्ने) । आफ्नो अलग पहिचान बनाउनु बेस हुन्छ । अरूको नामसँग जोडिएर परिचित हुनुभन्दा आफ्नै प्रतिभा, क्षमताले चिनिनु राम्रो हो । दिगो पनि यही हुन्छ ।
सुशान्त खत्रीजस्ता प्रतिभावान व्यक्तिलाई अबसरको कमी हुँदैन (नेपाली चलचत्रिमा काम गर्न तयार छु) । सम्भावना बोकेका यस्ता कलाकारलाई निर्माताहरूले पनि स्थान दिनु जरुरी छ ।
जुही चावलाको कुरा सही हो (आँखा खोल्ने स्टाटस) । उनको ट्वीटको विरोध गर्नुभन्दा यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ ।
यो सकारात्मक काम प्रशंसनीय छ (सानो पर्दा : युट्युबबाट समाजसेवा) । सबै मिडियाकर्मीले यस्तै भावना बोक्ने हो भने समाज परिवर्तनमा धेरथोर सहयोग पुग्ने थियो ।